Aiza no Misy ny Best tanàna koa ho an'ny Foodies In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Aiza no Misy ny Best tanàna koa ho an'ny Foodies In Eoropa
Sakafo tokoa be voninahitra, indrindra sakafo matsiro. Tena mora ny ho adala izany, rehefa nipetraka tany Eoropa manome anao be dia be izany antony! Ny tsara indrindra ho an'ny Foodies tanàna ao Eoropa, matoky antsika isika ary koa foodies, ary dia ho toy izany taminareo, fony ianao amin'ny alalan'ny amin'ny bilaogy ity! Just, mamaky tsara.
Ity misy fantina ny tsara indrindra ho an'ny foodies tanàna tany Eoropa fa afaka mahatratra lamasinina:
Ny olon-drehetra mahafantatra izany amin'ny alalan'ny izao - raha ianao no mandeha any Eoropa ho raiki-pitia, ianao dia ho any Frantsa. Tsy Fantatrao ve anefa fa ianao no handeha any Frantsa ho raiki-pitia sy ny eateries, ihany koa! Ao amin'ny firenena malaza noho ny fitiavana ny sakafo sy ny fanomanana azy, fa mafy ny haka ny toerana tena toerana fanasam. Aza diso, anefa – Lyon dia iray amin'ireo Frantsa ambony toerana mba hijery foodie! ny fangatahana: nivava salami rosettes nanompo tamin'ny vaovao maitso sy cornichon pickles ovy endasina. Lyon dia mifandray amin'ny Soisa ny rail dia afaka miseho eo foana io "sôkôla firenena"Ho hanitra hohanina farany.
Lyons mahazo ao amin'ny laharana ny tsara indrindra ho an'ny Foodies Tanàna any Eoropa noho ny sôkôla mahafinaritra sy ny maro hafa.
Brussels mankany Lyon Highspeed Train
Ny tanàna naresaka Vienne dia izay alehanao ny tsara indrindra ho an'ny sokola mofomamy tany Eoropa - Sachertorte. Manan-karena amin'ny tsiro, maizina sy lalina, Izany no antony, ny manam-pahaizana nomena mofo Aotrisy mba ho iray amin'ireo tsara indrindra ho an'ny Foodies Tanàna any Eoropa. dia aiza no ahitana ny iray? Na izany na tsy ny Vienne ny kafe trano! Izao no firenena sonian'ny mofomamy, ary ny mponina ho azo antoka fa fantatrao izany.
FANAMARIHANA: Hanaikitra sary vitsivitsy tao an-tanàna sy ny sakafo raha mbola misy – ianao dia te manao ny Instagram hamirapiratra, tsy ya?
San Sebastian, Espaina
Rehefa te mikapoka antoko rehetra tsara indrindra amin'ny tanàna, hisakafo fotsiny avy ao San Sebastian! Raha tsorina, dia afaka mihinana Tapas na aiza na aiza ao Espaina, ary tia azy ianao. NEFA, mba hahazo ny tsara indrindra tamin'ny TSARA INDRINDRA, hanandrana azy amin'ity tanàna amoron'ny ranomasina. Inona no mahatonga izany ity toerana ity no tena manokana ny isan-karazany ny tsirony sy ny artistry afaka misafidy avy. Masiaka sy maharikivy, mafana sy mangatsiaka, rustic sy be pitsiny, rehetra mba ho hita ao amin'ny iray fisotroana. Andramo vitsivitsy isaky ny sekely toerana hitanao. Ianao ho feno, nefa Ho very maina izany.
Eny, fiaran-dalamby hanina mety ho mahatalanjona Kanefa na dia fiaran-dalamby sakafo tsara indrindra mampitaha ny Copenhagen ny Noma! dia ny Fanilo ny Nordic sakafo, ary tokony hanao ny zava-drehetra ao amin'ny hery handeha hanamarina izany. Tsy vitan'ny hoe ity iray ity dia iray amin'ireo tsara indrindra ho an'ny Foodies Tanàna any Eoropa, fa ny eatery ihany koa no No.. 1 toerana ao amin'ny San Pellegrino lisitry nandritra ny taona maro! Eny, ny vidin-javatra dia avo, fa ny fanandramana ianao fahazoana ho very maina izany. Raha te-miseho eo Skandinavia lamasinina, Copenhagen vavahady lehibe dia nijanona noho ny manao izany.
Bonn any Copenhagen Lamasinina
Frankfurt ho any Copenhagen Lamasinina
izahay tombo-kase ny lisitry ny tanàna tsara indrindra ho an'ny Foodies miaraka amin'i Trieste, Italia
Tsy afaka manoratra momba ny Best Cities for Foodies any Eoropa tsy misy io ny rehetra deliciousness ny Italia. Eny ary ... tsy ny rehetra fa ny sasany, fara fahakeliny,.
Trieste an'ny Fanjakana Aotrisy-Hongria mandra-pahatongan'ny Ady Lehibe I. Izany zava-misy eto Mampitombo ny lanjan'ny sakafo matsiro Trieste ny. Nahoana? Satria ny tantara Trieste namela Mitana fiantraikany eo amin'ny nahandro. Atypical an'ny Italiana miavaka vilia, Trieste prides amin'ny combos hafahafa toy izany ny paty sy ny ny pizza miaraka ny laisoa nalona ary nivava saosisy, ary toy izany koa. Ankafizo tsara tarehy sakafo, creamy sôkôla, ary mahafinaritra kafe ao an-tanàna izay James Joyce nanomboka nanoratra Ulysses. Ny mahavariana fijery manerana ny Adriatika tsy handratra ny fahazotoan-komana, na. Ny fifandraisana eo amin'ny Italia sy ny Slovenia tanteraka ny lalamby, mba hahafahanao manome fotoana an'i Slovenia mandritra ny fiarahamonina.
Genoa ho Trieste Lamasinina
tantara, sakafo, ary handeha mandrakariva Eoropa akaiky, ary ankehitriny manana fahafahana hijery azy mora foana tena rehetra. Ampidiro Mamonjy Train mba hividy tapakila ny tenanao ny lalamby, ary manomboka ny traikefa nahafinaritra foodie anio!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-foodies-europe%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / en mba / de na / en sy ny maro hafa fiteny.
#traveleurope Food Tendan-kanina mpihinana sakafo Train Travel